Sunday November 29, 2020 - 23:47:16 in Wararka by Mogadishu Times
Mike Tyson oo ku soo laabtay feerka isagoo jira 54 sano ayaa ku dhamaaday barbaro 51-sano jir ah Roy Jones Jr. Sabtidii kulan sideed wareeg ah oo ay soo bandhigeen kooxdii hore ee miisaanka culus.
Shan iyo toban sano ka dib markii uu ka fadhiistay guuldaradii 2005 ee shirkadda Kevin McBride, Tyson wuxuu dib ugu soo laabtay Xarunta Staples ee ku taal Los Angeles iyada oo aan daawadeyaal loo arag ciyaar ciyaar-arag ah oo isku dhafka xiisaha iyo hilowga.
Saraakiisha Guddiga Ciyaaraha ee Gobolka California waxay dalbadeen laba daqiiqo oo wareeg ah halkii ay ka ahaan lahaayeen seddaxda daqiiqo ee caadiga ah, waajibaadka ka weyn kan caadiga ah ee 12-ounce galoofyada, ayaa sheegay in dagaalyahannada midkoodna uusan raadsan karin garaacid wuxuuna sharxay in uusan jiri karin guuleyste rasmi ah oo dhaqdhaqaaqa amniga ah 50 dagaalyahan.
"Mararka qaar labada daqiiqo waxay dareemeen sidii seddex daqiiqo,” ayuu yiri Tyson. "Waan ku faraxsanahay inaan tan ku helay suumankayga waxaanan rajeynayaa inaan markale sameeyo.”
Gudi "aan rasmi ahayn” oo ka tirsan horyaalkii hore ee Golaha Feerka Adduunka ee ringide ayaa barbareeyay ciyaarta, natiijada Tyson u sacab tumay inkasta oo ay u muuqato in ay xukuntay.
"Waan ku fiicanahay taas,” ayuu yiri Tyson, isagoo qirtay inuu u maleynayay inuu ku guuleystay dagaalka. "Haa, laakiin waxaan ku fiicanahay barbaro. Dadwaynuhu way ku farxeen taas. ”
Jones, oo umuuqday mid daalan oo soo qabtay Tyson inta badan dagaalka, kuma faraxsaneyn isku aadka.
"Marnaba kuma faraxsani barbaro. Ma sawirayo, ”ayuu yiri Jones, isagoo qiraya in Tyson uu ku dhaawacmay isaga intii uu socday dagaalka, gaar ahaan jugta jirka.
"Haddii uu kugu dhufto madaxaaga, dharbaaxo, xabad jirka ah, dhib malahan, wax walba way ku xanuujinayaan. Rasaasida jirka ayaa dhab ahaantii qaadatay qasaaro. Rasaasida jirka waa waxa ku daala.
Tyson, oo 50-6 ku aaday 44 garaacid, wuxuu lumiyay 100 rodol wuxuuna bilaabay tababarka markale, rabitaankiisa inuu qaabkiisa dib ugu soo laabto wuxuu noqday gaajo inuu mar labaad ku xirto galoofisyadiisa.
Jones, oo 66-9 ku garaacay 47 garaacid, ma uusan dagaalamin tan iyo guushii miisaanka dalxiis ee bishii Febraayo 2018. Wuxuu rajeeyay in dadaal adag oo ka dhan ah Tyson ay bilaabi karto dagaal ay la gasho 45-jirka reer Brazil ee isku dhafka fanka dagaalyahanada Anderson Silva .
‘Way dhaawici doontaa’
Tyson wuxuu ku soo baxay dagaal iyo deg deg, wuu ruxmay oo inta badan wuxuu ku xirnaa jirka Jones, oo mararka qaar garaaci kara isla markaana baxsan kara, ka dibna inta badan isku duubtaa Tyson markii wax kasta oo kale fashilmaan.
Waad soo noqotay. Waxaan kugu dhuftay darbo wanaagsan adigana waad qaadatay, ”ayuu Tyson u sheegay Jones. Waa inaan mar labaad sidan yeelnaa.
Midig bidix oo adag madaxa ayaa istaagay Jones wareega labaad wuxuuna inbadan ku qaatay wareegyadii seddexaad iyo kan afraad isagoo haya oo ula dhaqaaqaya tabaha Tyson.
"Waxaa jira wax halkaas ka jira oo ka qaadanaya garaacista Mike,” ayuu yiri Jones. "Marka aan halkaa joogo, waxaan ahay ciyaar. Waxaan tagayaa dhamaadka. Waan ogahay markuu i garaaco, inay wax yeeleyso.
Tyson wuxuu soo degay midig iyo bidix adag oo ka soo horjeeda madaxa Jones ’wareega shanaad, ka dibna wuxuu ku xiran yahay jirka midig adag iyo bidix lixaad, Jones wuxuu ka fogaanayaa toobiye midig wuxuuna xirayaa Tyson ka hor inta uusan soo degin isku dhafka waaweyn.
Tyson wuxuu wareejiyay qeybta dhexe ee Jones wareega 7-aad laakiin waa la qabtay kahor inta uusan riixin faa iidada.
Wareegii sideedaad iyo kii ugu dambeeyay, Tyson wuxuu ku dhuftay dhowr ka mid ah qabatooyin bidix oo jirkiisa ah laakiin Jones ayaa isku xiray waxayna ku dhammeeyeen ganacsiga dharbaaxo.
"Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan tago sideed jeer,” ayuu yiri Tyson. Aad ayaan ugu faraxsanahay inaan fogaado.
Waxaan ka baqay inaan naftayda wax yeelo. Muxuu qofna uga walwalayaa dameerkeyga? Anigu sidaas ma aanan samayn 15 sano.
Tyson wuxuu si xoog leh u xakameeyay qeybtii miisaanka culus dabayaaqadii 1980-meeyadii laakiin wuxuu la dagaalamay 1990-yadii oo uu lumiyay cinwaankiisii, waxaa lagu xukumay kufsi wuxuuna u adeegay ganaax ka dib markii uu qaniinay dhagta Evander Holyfield.
Wuxuu ka madoobaaday masraxa ka dib markii 2002 lumiyay cinwaanka adduunka Lennox Lewis waxaana uu haatan ku soo laabtay si uu uga caawiyo furitaanka Legends Only League ee ciyaartooyda waa weyn.
"Tani way ka weyn tahay u dagaallanka horyaalnimada,” ayuu yiri Tyson. "Hadda dadka waan caawiyaa.”